စျေးကွက်ရှာဖွေရေး: သင်၏ B2B အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကို align လုပ်ခြင်း Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ၀ ယ်ခြင်းခရီးသည်များစွာပြောင်းလဲသွားသည်။ ၀ ယ်သူများသည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့်စကားမပြောမီကြာမြင့်စွာကတည်းကသုတေသနပြုကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္playsတွင်ရှိသည်။ သင်၏စီးပွားရေးအတွက်“ smarketing” ၏အရေးကြီးမှုနှင့်သင်၏ရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုအဘယ်ကြောင့်ချိန်ညှိသင့်သည့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Smarketing သည်သင်၏ရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုစည်းလုံးစေသည်။ ၄ င်းသည်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ဘုံဝင်ငွေပန်းတိုင်များနှင့်ပတ်သတ်သောမစ်ရှင်များကို align လုပ်ရန်အာရုံစိုက်သည်။ ဤအုပ်စုနှစ်စုကိုအတူတကွပေါင်းစည်းသောအခါသင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။
တိုးတက်လာသောဝင်ငွေ retention ကို
သင်၏ကုမ္ပဏီသည် 'စျေးကွက်ရှာဖွေရေး' တွင်အဘယ်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သနည်း။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအဖွဲ့များကိုလွဲမှားစွာသတ်မှတ်ခြင်းသည်သင်နားလည်ထားခြင်းထက် ပို၍ အန္တရာယ်များနိုင်သည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်ဤအုပ်စုများကို Silo နှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည်။ ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းသူတို့၏ပန်းတိုင်များသည်နောက်ဆုံးတွင်အတူတူပင်ဖြစ်သည် - ဖောက်သည်အသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအာရုံစိုက်ရန်။
အကယ်၍ ၎င်းတို့အားမှတ်ပုံတင်ထားပါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းဌာနများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲလွဲနေကြသည်။ သူတို့ကိုသင်အတူတကွစုဆောင်းသည့်အခါလေ့လာမှုများအရသင် ၀ င်ငွေ၏ ၃၄% တိုးလာပြီးဖောက်သည်များထံမှ ၃၆% တိုးလာသည်ကိုနားလည်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဖွဲ့များကိုဤပေါင်းစည်းခြင်းကသင်၏ကုမ္ပဏီအားသင်၏ဖောက်သည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်စေပြီး၊ အကြောင်းအရာများ၊ ကြော်ငြာများနှင့်စားသုံးသူနှင့်ထိတွေ့မှုများကိုအသိပညာတိုးမြှင့်စေသောနည်းလမ်းများအားအသိပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းကဏ္ the အခြားတ ဦး တည်းဖြည့်စွက်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များသည်ဖောက်သည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းကာ ၀ င်ရောက်လာသည့်ခဲထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အကြောင်းအရာများကိုတီထွင်ကြသည်။ ထိုအရပ်မှ, အရောင်းအဖွဲ့သည်ဆက်သွယ်ရေးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဤဆောင်နှင့်အတူပြေး။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ ဤအုပ်စုများသည်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းတွင်သာရှိနေခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ဖောက်သည် Centricity အပေါ်အာရုံစူးစိုက်
သင့်တွင်ဖောက်သည်ဗဟိုပြုစီးပွားရေးပုံစံရှိပါကမကြာခဏအနိုင်ရသောနည်းဗျူဟာကိုသင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သင်၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုသင်အာရုံမစိုက်သင့်ပါ။ ယင်းအစား၊ သင်သည်သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုမည်သို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်ကိုရှာဖွေသင့်သည်။ သင်၏နိမ့်ကျသောအဆင့်ကိုခိုင်မာစေရန်သင်၏ရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုစုရုံး။ ပရိသတ်၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ပြီးသူတို့၏နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ပါ။
စျေးကွက်မှ ၀ င်ငွေ၏ ၂၀၉% ပိုမို
အပေးအယူများပိတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် ၆၇% ပိုမိုထိရောက်
သင်ဖန်တီးထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများစုစုပေါင်း၏ ၆၀ မှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အသုံးမပြုရဟုသင်သိပါသလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ smarketing နည်းဗျူဟာတွေကိုအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်၊ သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနမှာအကြောင်းအရာဖန်တီးနေသူများကသင်၏အရောင်း ၀ ယ်သူများလိုအပ်တာကိုနားမလည်ကြဘူး။
သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်အားထုတ်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောရောင်းချသူများကိုသင်ရှာဖွေသောအခါဝယ်သူခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုဘက်စုံချဉ်းကပ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင်ဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားနေသောဖောက်သည်များအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောနည်းလမ်းများဖြင့်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသင်လိုချင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ပရိသတ်ကြားရှိထိတွေ့မှုတိုင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းသတိရပါ။ ဦး ဆောင်မှုအရည်အချင်းမှသည်ဖောက်သည်သက်တမ်းတိုးခြင်းအထိယုံကြည်မှု၊ သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့်ရလဒ်များအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းအမြဲရှိသည်။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်မှု၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်သင်အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သောနည်းလမ်းများကိုပြောင်းလဲလိုစိတ်ရှိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ServiceSource မှအဖွဲ့သည်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ပြင်ပဖြေရှင်းမှုများအတွက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည် ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
Tags: alignment ကိုinfographicစျေးကွက်ရှာဖွေရေး alignment ကိုရောင်းအား alignment ကိုအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများsmarketing
Stephanie Sperry သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြီးတန်းဒါရိုက်တာဖြစ်သည် ServiceSource။ သူမ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများသည် Sperry အားကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များအတွက်ဖောက်သည်များခရီးစဉ်တိုးတက်စေရန်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိစေရန်သူမ၏စွမ်းရည်များကိုစကေးချဲ့ထွင်ရန်နေရာချသည်။
သင့်ရဲ့ခေါင်းစဉ် tag များ (ဥပမာနှင့်အတူ) ပိုကောင်းအောင်လုပ်နည်း